Shabaabka Gedo oo Afduubtay gaari ay leedahay Hayad samafal
Wararka ka imaanaya magaalada Garbahaareey ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in Al Shabaab ay xalay ka afduubteen Tuulo Borwaaqo oo dhowr KM u jirta magaalada Garbahaareey gaari ay leedahay hayad samafal.
Gaariga oo kasoo ambabaxay magaalada Baladxaawo kuna sii jeeday Garbahaareey ayaa waxaa la sheegay in uu waday gargaar Daawo oo loogu tala galay dadka ku jira Isbitaal magaalada balse Al Shabaab ayaa waxa ay u galeen wadada oo afduubtay.
Macadda halka ay Shabaabku la aadeen gaarigaasi oo Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ay baadi goob ugu jiraan.
Shabaabka gobolka Gedo ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore ay leexsadeen gaadiid waday gargaar loogu tala galay dadka ku tabaalaysan gobolka balse makala cado in dawooyinka gaarigaani uu siday in ay lahayd dowladda iyo in dadka shacabka ah loogu tala galay. Xaafiiska Wararka Warlalis.com